China Abenzi bePlati yeNdonga yangaphandle yoLungiso kunye nabathengisi | Longjie
IINKCUKACHA ZAMANQAKU NOKUFUNDA
I-PVC yangaphandle yoLudwe oluxhonywe kulwakhiwo lwezinto zokuhombisa zokwakha, i-PVC yangaphandle yodonga olucekeceke ipleyiti iya kuba zezona zinto zingcono zokwenza ipeyinti yodonga lwangaphandle kunye neethayile zeceramic. I-PVC yangaphandle yeNdonga yokulenga i-PVC (PVC), efanelekileyo kwiintlobo ezininzi zezitayela zokwakha, ezifana ne-villa, indawo yokuhlala, iworkshop kunye nesakhiwo esidala. Imigca yePlati yangaphandle yePlati ejingayo ecacileyo, emfutshane kwaye eqaqambileyo, yanamhlanje, enokumelana nemozulu ephezulu. I-PVC yangaphandle yodonga oluxhomekeke kwipleyiti ukuze ulwakhiwo lube lula kwaye luyindalo kwaye luhle, luyakwazi ukumelana nazo zonke iintlobo zemozulu embi kunye nokumelana nokumelana, kulula ukuyifaka. Nokuba kuyimveliso okanye kukwinkqubo yokuvelisa, kuyenzeka ukuba imeko-bume ingangcoliswa, kunye nokusetyenziswa kwakhona, yinto efanelekileyo yokuhombisa indalo.
I-PVC yangaphandle yoLungiso lweeNdawo zokuHamba
1.Uludonga lwangaphandle lwePVC luxhome imbonakalo yoyilo lwenkuni, ngobuhle obulula kunye nendalo, imibala eyahlukeneyo kunye noyilo loyilo. Uthotho PVC udonga ukuxhoma ipleyiti kungadityaniswa, nazo zinokudityaniswa kunye nezinye izinto uhombiso eludongeni umgangatho, noburhabaxa ezahlukeneyo izinto ezifana inkcubeko ilitye, izitena zokuhombisa, esetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo, intelekelelo, ukutshintsha isimbo indibaniselwano, ukushiya ubumnandi obunzulu bokubona .
2.Ukuguga oku-Anti, ukumelana nemozulu ngokugqwesileyo, ubomi obude benkonzo ye-PVC yangaphandle yodonga oluxhonywe yisitishi esisebenza ngokukuko kunye nesisebenza ixesha elide esine-composite ekhethekileyo, anti-ukuguga, imitha echasayo inokumelana nazo zonke iintlobo zemozulu embi, ezahlukeneyo Iziphumo zemozulu zendalo ezinokuhlala ixesha elide ezinje ngezintsha, zithintele ukuphalazwa kokuphalazwa kweemoto, ziphinde ziphinde zilungiswe kunye nezinye iingxaki, wenze ulondolozo lwakho kube kanye, ubomi beminyaka engama-30 ngentla.
3. iipropati zomzimba ezibalaseleyo kunye neempawu zamachiza e-PVC yangaphandle i-Plate Hanging Plate enobukrelekrele obuhle, ukuxhathisa okukhulu kwimpembelelo yothuselo lwangaphandle, inokusekwa kuyilo lobunjineli olwahlukileyo kunye neemfuno zenkqubo yokusika okungahambelaniyo, ukugoba imilo yotshintsho, ayizukuqhekeka, akukho lula ukukrwela, i-asidi kunye ne-alkali corrosion kunye nomphunga wamanzi, ukuqhuba okuphantsi kwe-thermal, ukucima umlilo okhawulezayo, kunokulibazisa ngokufanelekileyo ukusasazeka komlilo.
Ukufakwa oku-4 okulula, ukonga umbane, izibonelelo eziphezulu ezibanzi zenkqubo yokufakelwa kwephaneli yePvc elula kwaye ekhawulezayo, yokusebenza eyomileyo, eqinileyo nethembekileyo, yokugcina ixesha kunye nabasebenzi, ukunciphisa ixesha lokwakha, ukunciphisa kakhulu iindleko zokufaka. Ukuxhoma iipleyiti zangaphakathi kungalula kakhulu ukufaka izinto zokwambathisa eludongeni, ukuze umphumo wokugquma eludongeni lwangaphandle ubalasele. Ngokukodwa kufanelekile ukuguqulwa kodonga oludala, ngaphandle kodonga oludala zizitena okanye ipeyinti, inokuba ngqo kulwakhiwo lodonga oludala.
Imveliso kwinkqubo yokuvelisa okanye kwindlela yobunjineli kwindalo ayibangeli ungcoliseko, kunye nokusetyenziswa kwakhona, yinto efanelekileyo yokuhombisa indalo.
Uhlobo lwePlate kunye nokupakisha:
◇ Le pateni: ipleyiti yokuxhoma yaseYurophu,
◇ Lo mgangatho weplate ubude: ziimitha ezine ubude.
◇ sebenzisa: eludongeni uhombiso nophahla nophahla lwezincedisi eziphambili: ukuqala, i-J-bar, vala umlomo, ikholam yangaphandle yekona kunye nekholam yekona, ibhodi ye-cornice, njalo njalo.
◇ Zonke ezi zincamathiselo zingentla zisebenzisa ufakelo ngokulula ngakumbi, ukubonakala kokulungelelaniswa, kwaye indawo yokudibana inomahluko wendawo yokwandiswa nokucutha
Inkqubo yokwenziwa kwePlati yangaphandle yoLungiso lweNdonga
Egqithileyo PVC Classic Horse Kucingo olubiyele
Okulandelayo: Ukukhanya kwendlela yelanga engenasici (2-Pack)